IHoroscope yeTaurus: Yonke imihla, iVeki kunye neNyanga yeTaurus Horoscopes - Itaurus
Imihla ngemihla, iVeki kunye neNyanga yeTaurus Horoscopes x NgoLwesine 07/29/2021 Horoscope:
Ubona ingqiqo eninzi kwizenzo ezithile, kodwa zisenokukudanisa ekuhambeni kwexesha ukuba awunanjongo eqinileyo yokujonga phezulu. Kufuneka ibe ngumsebenzi wakho ophambili ukuzenza wonwabe ngakumbi, kunokuba uleqe naluphi na uphawu olunokuthi lukwenzele oko, ekuhambeni kwexesha.
Nika kuphela oko unako... Qhubekela kwiTaurus yemihla ngemihla yeHoroscope ... NgoLwesihlanu 07/30/2021 Horoscope:
Mhlawumbi amazwi akho neengcinga zakho zisabhida. Sukuzama kakhulu ukucacisa into engacacanga engqondweni yakho kwaye uthathe ixesha lokunika izinto imilo kunye nefom eya kwamkelwa kwaye iqondwe kakuhle kwindawo yakho, ukuze uthembele ekusebenzeni kweqela ngelixa uhambela phambili.
Into oyivayo... Qhubekela kwiTaurus Ngomso kwiHoroscope ... 07/26/2021 - 08/01/2021 Horoscope:
E-Netherlands, i-inshurensi yezempilo yabucala inyanzelekile kuye wonke umntu. Nangona abaninzi bengayi kukonwabela ukuhamba kweVenus ngeVirgo, uyasithanda isakhiwo kunye neenzuzo ezisebenzayo eziza nayo. Ezinye iinkqubo ziyakuxhasa ngcono kunezinye kwaye uyazi ukuba sesiphi isizwe onqwenela ukusijoyina, kwaye yintoni ebangela ukuba ufune ukulandela.
Nangona kunjalo, ... Qhubekela kwiTaurus yeVeki yeHoroscope ... NgoJulayi 2021 ngeHoroscope:
Le yinyanga xa iVenus ekugqibeleni iya kugxotha iMars eLeo, xa iingcango kuzo zonke iintlobo zamabali othando zinokwenzeka ebomini babameli beTaurus. Iimvakalelo ziyaphakama kwaye kunokuba shushu kakhulu ukuba uhlale phantsi kolawulo. Cinga ixesha elide kwaye unzima ngaphambi kokuzibeka emngciphekweni wena okanye abantu obathandayo kwi ... Qhubekela kwiTaurus yeNyanga yeHoroscope ... Izolo Namhlanje Ngomso Kule veki Kule nyanga 2021 Taurus Uthando
Iiplanethi ezikude kwi-Local Space Astrology
I-Uranus, iNeptune kunye nePluto zinendima yazo ekhethekileyo kwikhaya lethu, njengoko zimele imicimbi edibeneyo ngaphandle kolawulo lwethu olukhokelela ekuvukeni.
Ukuphakamisa ulwazi kunye nokuhambela phambili, kufuneka siyiyeke imifanekiso ebotshelelwe ebantwini kunye neemeko zangaphambili kwaye samkele ukuphoxeka.
Ukuma kunye noTshintsho
Ngaphandle kwempembelelo ecacileyo yeSaturn, ukubola kunye neemeko ezinqabileyo ebomini bethu kunokubonwa ngezinye iimpawu kwitshathi yethu yokuzalwa.
Umhlaza Aquarius Aries Isagittarius I-Capricorn